ड्रिलिङ ह्यामर - iSearch
सुरु आफैलाई उपकरण रोटरी हथौडा
जुन 4, 2017
1 रोटरी ह्यामर के हो?
2 साँच्चिकै सानो पावर प्याकहरू!
3 ह्यामर ड्रिलसँग के गर्ने?
4 हथौड़ा ड्रिलले काम राहत दिन्छ
5 ह्यामर ड्रिल खरिद गर्दा तपाईंले के गर्नुपर्छ?
6 महत्त्वपूर्ण हुनुहोस्: मेशिन कति पटक प्रयोग गर्नेछ?
7 प्राविधिक परिशोधन
8 ह्यामर ड्रिल कसरी काम गर्दछ?
9 हिसाब सिद्धान्त
10 के हुन् व्याख्याहरू र के यो विशेषता छ?
11 लाभ र हानि
रोटरी ह्यामर के हो?
एक रोटरी हथौडा हार्ड कलर प्रकार र ठोस कंक्रीटमा छेद ड्रिल गर्ने उपकरण हो। यसलाई प्रयोग गरिएको छ जहाँ प्रभाव ड्रिल यसको सीमामा ल्याइन्छ। यसको मतलब यो शक्तिशाली उपकरण कुनै निर्माण स्थलमा हराइरहेको हुन सक्दैन। तर घर वरपरको निजी प्रयोगमा पनि, जब केहि निर्माण कार्यहरू लिइन्छ, ह्यामर अभ्यास सधैं एक आभारी उपकरण हो।
साँच्चिकै सानो पावर प्याकहरू!
सानो शक्ति प्याकहरू 19 को सुरंग र खनन उद्योगमा उत्पन्न हुन्छ। शताब्दी र यति धेरै शक्तिशाली छन्। त्यसैले तपाईंसँग कुनै पनि वास्तविक विरोधीहरू वा कुनै पनि ठूलो सामग्री छैन, चाहे तपाईं पर्खाल, पर्खाल वा अन्य सामग्रीमा काम गर्न चाहानुहुन्छ।
ह्यामर ड्रिलसँग के गर्ने?
रोटरी ह्यामर ड्रिलिंगको साथमा, डेभल होल र एंकर्सले इस्पात-हार्ड पर्खालहरूमा ड्रिल गर्न सकिन्छ। स्पष्ट रूपमा जब प्रभाव ड्रिल आफ्नो सीमा पुग्छ एक कठिन मात्राको कारणले, ड्रिल हथौड़ाले यसको सबै बलको साथ मनाउँछ। यो प्राय: पुरानो पूर्वनिर्मित इमारतहरुमा मामला छ, जहां एक हथौड़ा बिना ड्रिल को आवश्यकता छैन। ह्यामर ड्रिलको लागि त्यहाँ उपयुक्त छ ड्रिल कलर.
हथौड़ा ड्रिलले काम राहत दिन्छ
प्रत्येक DIY उत्साहीको लागि जुन राम्रो तरिकाले सुसज्जित कार्यशालाको साथ चमक गर्न चाहानुहुन्छ, ह्यामर उनको उपकरणको अभिन्न भाग हो। रोटरी ह्यामरको साथ, तपाईं मारिन र रोटरी ड्रिलिंग लक्ष्य गर्न सक्नुहुनेछ - कुनै पनि कंक्रीट पर्खाल कसरी हाल्नु हुन्छ। मेशिन तुलनात्मक रूप देखि कम शोर स्तर संग यसको धेरै ठोस र कुशल आपरेशन द्वारा विशेषता हो। यो विशेष रूप देखि कम संपर्क दबाव र निचला गति को कारण हो। मामलाको हाइलाइट यो हो कि ड्रिल ह्यामरलाई थिचाइ राख्न वा तपाईंलाई आवश्यक पर्खाललाई धक्का दिदैन र त्यसैले तपाईलाई प्रयोगकर्ताको रूपमा धेरै कम बल लागु गर्नु पर्छ। त्यसकारण, तिनीहरूले उपरि कामको लागि पनि उत्कृष्ट छन्।
थियो के तपाइँ ह्यामर ड्रिलको खरिदमा ध्यान दिनुपर्छ?
एक ड्रिल ह्यामर तपाईंको उपकरण पार्कको बहुमूल्य अतिरिक्त हो जब तपाईं भारी स्टील र कंक्रीट पर्खालहरू काट्न चाहानुहुन्छ। कुञ्जी विशेषताहरु को बीच, सुनिश्चित गर्नुहोस कि ड्रिल को हैंडगिप ergonomically आकार को छ, नरम रबड देखि बनाइन्छ र कंपन-इन्सुलेटेड छ ताकि यो उपकरण संभव छ को रूप मा आरामदायक छ। समान महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ अनावश्यक रूपमा जीवन नमान्नुहोस्! सम्भावित ओभरहेड कार्यको अवस्थामा तपाई आफ्नो खरिद निर्णय पछ्याउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अनुकूल उपकरणहरू ब्रान्डेड उत्पादन भन्दा उच्च वजनको लागी भनिन्छ।
महत्त्वपूर्ण हुनुहोस्: मेशिन कति पटक प्रयोग गर्नेछ?
कसले प्राय: ह्यामर ड्रिल प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन सम्भवतः एक शिल्प उपकरणको रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ। साथै, तपाइँ पहिले नै पहिल्यै जान्नुपर्छ कि तपाइँ ह्यामर ड्रिलसँग कसरी काम गर्न चाहनुहुन्छ र कति पटक मेशिन प्रयोग गरिने छ। कहिलेकाँही प्रयोगकर्ताको रूपमा, यो तपाइँलाई यन्त्रमा लगानी गर्न सबै सल्लाहकार हुन सक्छ जुन ह्यामर बन्द गर्न र नियमित ड्रिलिंग मेसिनको रुपमा प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसोभए तपाईंले दुई जना चराहरू एक ढुङ्गामा हिर्काउनु भयो? साथै, कहिलेकाहीं प्रयोगको घटनामा, ब्याट्री अपरेसनको साथ ह्यामर ड्रिल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो पनि प्रयोग गर्न लचीला छ किनभने यो बाह्य बिजुली आपूर्तिसँग बाँधिएको छैन। राम्रो कुरा हो कि ब्याटरहरू अब धेरै शक्तिशाली छन् र तपाईले समस्या बिना धेरै ड्रिलिंग गर्न सक्नुहुनेछ। खास गरी यदि तपाईं धेरै आदी उपकरणहरू जस्तै ताररहित पेचकस, एक ताररहे हथौड़ा ड्रिल आफ्नो स्टकमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। यसको अतिरिक्त, धेरै ब्याट्रीहरू आश्चर्यजनक रूपमा विभिन्न यन्त्रहरूमा फिट हुन्छन्। त्यसोभए तपाईसँग सधैँ पहिले नै चार्ज गरिएको ब्याट्रीमा हातमा हुनुपर्दछ। यदि यो बाह्य बिजुली आपूर्तिसँग लैजान सकिन्छ भने, पर्याप्त केबल लम्बाइ पक्का हुनुहोस् - यसलाई कम से कम तीन मीटर प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ - ताकि तपाईं कामको बाटोमा पाउँनुहुन्न।
बियरको डिजाइन महत्त्वपूर्ण छ, यो ठोस सामाग्रीको निर्माण गर्नु पर्छ ताकि यसले आफ्नो अनुप्रयोगलाई हानिकारक रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्छ। तथापि, निर्माण विधि धेरै ठूलो हुनु हुँदैन, किनकि यो फेरि फेरि महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यसपछि ह्यामर ड्रिलको साथ काम लोडलाई खराब हुनेछ। एक धेरै महत्त्वपूर्ण विशेषता हो जुन तपाईंको ह्यामरले कम्तीमा 5000 प्रति मिनेट धकेल्ने सबैभन्दा राम्रो प्रभाव हो, जुन उत्तममा समायोजन गर्न सकिन्छ।
ह्यामर ड्रिल कसरी काम गर्दछ?
ह्यामर ड्रिलले असर दालहरू पठाउँदछ जुन ठूलो सामग्री तल लगाउँछ र सामग्री रोटरी आंदोलनको प्रयोग गरी बिच्छेदन गरिन्छ। यसैले मेशिन पट्सेल ड्रिल भन्दा फरक प्रभाव सिद्धान्त अनुसार संचालित गर्दछ। लगभग 5000 प्रति मिनेट धकेलिएको छ - प्रभाव ड्रिलको अवस्थामा भन्दा कम - उत्पन्न हुन्छ तर धड्कन तीव्रता सबै उच्च हो र यो सबै शक्तिशाली छन्।
नामको रूपमा, पर्खालको विरुद्ध हामर ड्रिल ह्यामरहरू। भित्रको उपकरण एक न्यूमेटिक प्रभाव तंत्र हो, जसमा तथाकथित ड्रिल चक उत्पन्न गर्दछ। नतिजाको रूपमा, ड्रिल टिपमा एकदमै बलियो प्रभाव छ, ड्रिल ह्यामर सजिलै संग पर्खालमा घुमाइएको छ, र समाग्री अन्ततः धेरै राम्रो अन्नको टुक्रा छ। वायवीय ड्रिल ह्यामरहरूको अलावा, त्यहाँ हाइड्रोलिक ड्रिल ह्यामर पनि छन्। दुवै बीचको भिन्नता यो हो कि निमन्त्रित संचालित मिसिन कम हुन्छ र यसरी निजी प्रयोगको लागि अझ उपयुक्त छ। अर्को हाइड्रोलिक ह्यामरहरू, निर्माणको निर्माणमा प्रयोग हुने सम्भावना बढी छन् किनभने तिनीहरू उच्च ध्वनि तह उत्पन्न गर्छन्।
यदि तपाइँ ह्यामरको तल पोर्श खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो निश्चित गर्नुहोस् कि यसमा दुई गियर चरणहरू र एक भनिने रोटेशन रोक्न उपकरण छ। के लागि दुई गियर चरणहरू प्रयोग गरिन्छ? पहिलो गियरमा, तपाईं बिस्तारै ठूला प्वालहरू ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ, जबकि दोस्रो गियरमा, साना प्वालहरू उच्च गतिमा ड्रिल गरिएका छन्। गति यहाँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तपाईं अझ बढी सटीक ड्रिल परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। रोटरी रोक उपकरणले तपाईंलाई हल्का क्रिस कार्य प्रदर्शन गर्न सक्षम गर्दछ जस्तै, उदाहरणका लागि, स्लट नियन्त्रण गर्न।
खरिद गर्नु अघि, यो फरक डीलरों र उपकरणहरू तुलना गर्न लायक छ। कहिलेकाहीँ ह्यामरहरू पनि एक सहायक सहायक मामलासँग खरीद गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंको मेशिनको धेरै बढ्दो मूल्य बढाउँछ।
ड्रिल ह्यामरको एक ठूलो फाइदा हो कि यो वास्तवमा कुनै पनि वास्तविक विरोधाभासहरू छैनन् - कुनै पनि पर्खाल कसरी भइरहेको छ भने, पावर प्याक सटीक र सुरक्षित प्रयोगमा छ। र सबै भन्दा राम्रो भाग यो कम संपर्क दबाव र यसको कम गतिको कारणले तुलनात्मक रूपमा चुपचाप सञ्चालन गर्दछ। समानतः फायदेमंद यो तथ्य हो कि नमूनाहरू प्रभावकारी असर तंत्र संग एक अपेक्षाकृत सानो बल व्यय संग संचालित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि खरिद बन्द दिन्छिन् - तपाईं जसमा तपाईं बन्द हथौडा बारी एक मिसिन लागि रोज्न र तिनीहरूले त्यसैले नियमित ड्रिल रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंले मिसिन संग विभिन्न कार्यहरू गर्न अनुमति दिने, खुला हात Werkens को दुनिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, ह्यामरहरूले एकपटक प्राप्त गरेको उपकरणहरू छन्, लामो समयसम्मको उपकरण साबित।
ड्रिल ह्यामरको खरिदको खतरा भनेको हो कि यो अपेक्षाकृत महंगी यन्त्र हो, जुन यसको मेशिन पार्कमा मिसिएको हुन सक्छ, किनभने काम प्राय: अन्य उपकरणहरूसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ - कम सजिलो हुन्छ। तथापि, धेरै कामदारले भने कि ड्रिलिंग टिप को सटीक ह्यान्डलिंग र नियन्त्रण मात्र भारी हथौड़ा हथौड़ा र यस कम्पन उत्पादन को कारण अधिक कठिन हुन सक्छ।
ह्यामर ड्रिल एक धेरै उपयोगी उपकरण हो यदि तपाई प्राय: इस्पात-हार्ड पर्खालहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्दछ। स्पोरडिक प्रयोगका लागि, यो अवस्थित उपकरणसँग अनुप्रयोग प्रदर्शन गर्न केवल उपयोगी छ - भइरहेको काम प्रक्रियालाई अधिक बल चाहिन्छ। खरिद गर्नु अघि, तपाई आफैलाई आत्म-पर्याप्त र ईमानदार हुनुपर्दछ: हमरर ड्रिलको प्रयोग कहिले काही नै आवश्यक पर्दछ? यदि तपाइँ यसलाई छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एक धेरै विश्वसनीय र प्रभावकारी उपकरण निश्चित छन्, जुन निश्चित रूपमा तपाइँको उपकरण पार्कलाई समृद्ध पार्नेछ, र तपाइँसँग यसको धेरै काम गर्ने मज्जा हुनेछ।
माकिता रोटरी हथौड़ा HR2470 प्रकरण + मेटाबो ड्रिल र छेसेको सेट 17 पीसी
मकिता रोटरी हथौड़ा HR2470
+ मेटाबो ड्रिल र छेन्नी सेट
बॉश प्रोफेशनल जीबीएच २-२ F एफ रोटरी हथौड़ा (एसडीएस प्लस ईन्टरचेन्जबल चक, १ mm एमएम कीलेस चक, २ mm एमएम ड्रिलिंग Ø, किकब्याक सुरक्षा, एल-बक्सएक्समा) प्रदर्शन
हथौडा ड्रिल GBH 2-28 F - उच्च ड्रिलिंग प्रदर्शन 880 वाट मोटर र 3,2 जे प्रभाव ऊर्जा को लागी धन्यवाद
ड्रिलमा आदर्श नियन्त्रण: किकब्याक कन्ट्रोलले अचानक ब्लकि। पत्ता लगाउँदछ र मोटरलाई रोक्दछ
कम्पन कन्ट्रोलको साथ समय-उपभोग गर्ने र दीर्घ-स्थायी अनुप्रयोगहरूमा अथक काम
एसडीएस प्लस परिवर्तन चक अधिकतम हथौड़ा ड्रिलिंग को अनुमति दिन्छ। 28 मिमी कंक्रीटमा र खाली कोर बिटसँग 68 मिमी सम्म
वितरणको स्कोप: GBH २-२2 F, अतिरिक्त ह्यान्डल, गहिराइ रोक्नुहोस् २१० मिमी, मेशिन कपडा, कीलेस चक १ mm मिलिमिटर, विनिमय चक एसडीएस प्लस, L-BOXX
Makita HR 2470 एसडीएस प्लस ड्रिल ह्यामर सूचक
ड्रिलिंग को लागि, हथौड़ा ड्रिलिंग र chiselling
शक्तिशाली 780 वाट मोटर उच्च शक्ति आरक्षित संग
प्रभावकारी ऊर्जा अधिकतम। 2.4 जे, मैक्स ड्रिलिंग Ø (काठ / स्टील / कंक्रीट) 32 / 13 / 24 मिमी
प्रयोगकर्ता र मेसिनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा असक्षमता क्लच
इलेक्ट्रोनिक रूपमा नियन्त्रित स्पिन र पिट
EINHELL हथौडा ड्रिल वें-आरएच 900 / 1 (900 डब्ल्यू,3जे, ठोस 26 मिमी मा ड्रिलिंग प्रदर्शन, एसडीएस-प्लस होल्डर, धातु गहिराई रोक, ट्रंक) प्रदर्शन
3 कडा सुविधाहरू: ड्रिलिङ, ह्यामर ड्रिलिङ, एक्सएन्युमएक्स वाट्सको साथ कम्पैक्ट पाउडरमा फिक्सेशनको साथ छेउमा
सुरक्षित काम र मोटर को सुरक्षा को लागि ओवरलोड क्लच
सबै निर्माण परियोजनाहरुमा सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेपण को लागि वायवीय प्रभाव तंत्र
उत्कृष्ट ह्यान्डलिङको लागि बलियो एल्युमिनियम गियर सिर अतिरिक्त ह्यान्डल र स्थिर गहिराईको माध्यमबाट हल्का वजन / थोरै सुरक्षाको कारण संरक्षण
एक व्यावहारिक यातायात र भण्डारण मामलामा वितरण
बश प्रोफेशनल ह्यामर ड्रिल GBH 2-26 एफ (830 वाट, परिवर्तन-ओभर एसडीएस-प्लस, प्रभाव ऊर्जा: 2,7 जे, सूटकेसमा) प्रदर्शन
ह्यामर ड्रिल GBH 2-26 एफ बाट बोस् प्रोफाईल - निर्माण स्थलमा दैनिक प्रयोगको लागि एक छिटो सबै राउन्डर
शक्तिशाली 830 वाट मोटर र 2,7 जे प्रभाव ऊर्जाको कारण उच्च छान्ने प्रदर्शन
अधिकतम एसडीएस प्लस उपकरण धारक। 26 मिमी हमर ड्रिलिंगमा कंक्रीट र 68 सम्म माथि मिल्दो खोल्ने कोर बिट संग कंक्रीटमा।
बहुमुखी अनुप्रयोगहरू सफा गर्ने कामको लागि chiselling र इलेक्ट्रनिक गति नियन्त्रण रोक्न धन्यवाद
वितरणको दायरा: GBH 2-26 एफ, अतिरिक्त ह्यान्डल, गहिराइ रोक, मेशिन कपडा, द्रुत-परिवर्तन ड्रिल चक, एसडीएस-प्लस परिवर्तन चक, शिल्पम्यानको मामला (3165140859202)
बश प्रोफेशनल ह्यामर ड्रिल GBH 3-28 DFR (800 वाट, प्रभाव ऊर्जा अधिकतम: 3,1 जे, एसडीएस-प्लस परिवर्तन चक) प्रदर्शन
बोस्टर प्रोफेसरबाट उच्च गति र कम कम्पनर मानहरू ह्यान्डर ड्रिल GBH 3-28 DFR
GBH 3-28 DFR को ड्रिलिंग र उच्च बिट दर प्रदर्शन मा तेजी देखि प्रगति छ
कम कंपन र संतुलित वजन वितरणको कारण, ह्यामरसँग काम अत्यन्तै सुन्दर छ
प्रतिस्थापनयोग्य चकको साथमा धन्यवाद (ड्रिलिङमा) ड्रिलिंग को बीच एक छिटो परिवर्तन र प्रभाव बिना (काठ र धातु संग) सम्भव छ।
बॉश रोटरी हथौड़ा PBH 2100 RE (550 वाट, यदि मामला मा) प्रदर्शन
ह्यामर ड्रिल PBH 2100 RE - बिना कंक्रीट र चिनाईमा चिन्ता, चिन्डिङ, ड्रिलिंग र 550 वाट क्षमता संग पेंच
टाइल्सको सजिलो हटाउन र केबल स्लॉटहरू सजिलो हटाउन
SDS-plus को सम्मिलित इन्टर उपकरणको छिटो र उपकरण-मुक्त परिवर्तन
प्रभाव को गति को बंद गर्न को लागी काठ या स्टील मा ड्रिल गर्न संभव छ
वितरणको क्षेत्र: PBH 2100 RE, गहिराइ रोक्नुहोस्, अतिरिक्त ह्यान्डल, केस
Einhell TC-RH 900 ड्रिल हथौड़ा (900 W, 4100 min.-1 स्ट्रोकको संख्या,3J प्रभाव शक्ति, हथौडा ड्रिलिंग, ड्रिलिंग र छेनी फिक्सेशन सहित chiselling, incl। 12 ड्रिल र छेनी किट, केस) प्रदर्शन
तीन शक्तिशाली विशेषताहरु: ड्रिलिंग, ह्यामर ड्रिलिंग, एक्सएनएमएक्स वाट बिजुली संग कम्पैक्ट पाउडर मा फिक्स्ड संग चिट्ठी
हल्का वजन / विरोधी मोडिङ सुरक्षाको कारण अतिरिक्त ह्यान्डल र स्थिर गहिराईको रोकथामद्वारा निपटने को लागि मजबूत एल्युमिनियम गियर टाउको रोकियो।
12-TGG ड्रिल र छलक सेट सहित, एक सुविधाजनक परिवहन र भण्डारण केस मा आपूर्ति
बॉश प्रोफेशनल रोटरी हथौड़ा GBH 2-20 D (650 वाट, ड्रिलिंग Ø कंक्रीट अधिकतम: 20 मिमी, एसडीएस प्लस, केसमा) प्रदर्शन
XMUMX वाट र2Joule प्रभाव ऊर्जाको साथ - बॉश प्रोफेशियलबाट हथियार ड्रिल GBH 20-600 D
केवल 4,2 किलोग्रामको कम्प्याक्ट र हल्का वजन डिजाइनका लागि धन्यवाद, GBH 2-20 D थकान रहित कार्य ओभरहेडको लागि आदर्श हो
बहुभाषी अनुप्रयोगहरू, किनकि GBH 20-2 कंक्रीट, चिनाई, धातु र काठमा ड्रिलिंग र chiselling लागि उपयुक्त छ।
जाम अभ्यासहरू जारी गर्न, ह्यामर ड्रिलसँग दाँया / बाँया भाग छ
आपूर्ति क्षेत्र: GBH 2-20 D, अतिरिक्त ह्यान्डल, गहिराई स्टप (210 मिमी), SDS- प्लस, केस
प्रस्तावBestseller no। 10
Einhell TH-RH 1600 4-Funktions-Bohrhammer, 1.600 W, Schlagzahl 3.900 min-1, Schlagstärke4J, SDS-Plus, Schlag- Drehstop, im KofferAnzeige
4 शक्तिशाली सुविधाहरू: ड्रिलिंग, हथौड़ा ड्रिलिंग, XCUMX वाटको शक्तिसँग कम्प्याक्ट पावरहाउसमा निर्धारण बिना र बिना सिसाइलि
अतिरिक्त ह्यान्डल र स्थिर गहिराइमा टिप गरेर एंटी-ट्विस्ट सुरक्षाले सही सीरियल बोरहरूको लागि धातुको बनाइयो
अघिल्लो लेखप्रशिक्षण कलर
अर्को लेखDAB Autoradio